Pakistana: Blog-o-coma · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Novambra 2018 12:09 GMT
Eny ary, nitranga ilay izy. Voakasoky ny kamiao lehiben'ny Hakamoana aho raha ilay teo am-pitaingenana ny Skotera Vespa natokiako teny amin'ny araben'ny aterineto, nitady blaogy marim-pototra ho asongadina ao anatin'ity lahatsoratra ity.
Halako ny milaza izany saingy hadisoako no niteraka ilay loza. Namily namakivaky ireo tranonkala be tabataba tsy lefitra maro izay nandrakotra ny lalamben'ny aterineto aho, lasa nivenjivenjy sy rendremana ary nivarina tany amin'ny làlana hafa. Nahatonga ahy hijoboka tao anatin'ny tebiteby sahalan'ny fahatoranana ny loza naterak'izany. Mialohan'ny hikiahan'ireo mpankafy ahy liana (eny, izy roa), ”Inona no tombony hiainana ela kokoa noho izany?!” Tsy maintsy manazava ny toe-piainako aho mba hahatonga ny zavatra ho tsara kokoa. Mba izany aloha no lazain'ny dokotera. Koa iangaviana ianareo, miezaha tsy hitebiteby.
Soa ihany, miresaka ao anatin'ny torimasoko aho ary afaka nandray an-tsoratra rohy mahaliana vitsivitsy navoakako ho amin'ny lahatsoratra amin'ity herinandro ity. Noho izany, tsy asiana resaka be intsony:
Maneho hevitra mikasika ny Antsa ho an'ny Filoha Bush ny Teeth Maestro; Manasongadina ny tsy hay takarina ny Windmills; Manao sary tena manelingelina be ny The Fountainhead miaraka amin'ny lahatsorany farany; manoratra mikasika an'i Tookie Williams ny Opinionated Voice; Manafatrafatra ny amboarampeo ny Venial Sin; ary farany, nanoratra mikasika ny habasivavako niaraka tamin'ny Strep Throat aho.
Tsara kokoa ho ahy ny miala dieny izao, satria efa voalahatry ny mpitsabo ho ao anatin'ny lisitry ny hahazo fitsaboana “Fandraka an-tampon-doha” aho mba hanairana ahy hiala amin'ny torimasoko lalina.